‘र’ « News of Nepal
‘र’ बाटै राजनीति बनेको छ । राजनीति नभई कुनै नीति बन्दैन, चल्दैन । यही राजनीति बिग्रँदा मुलुक र मुलुकबासीले अहिलेसम्म उस्तै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खालि सङक्रमणकालकै नाममा गुज्रिरहेका छौँ, हामी । अब त राजनीतिक स्थिरता आयो भनेको उही हालत । राजनीति बिँग्रदा मुलुकले पाएको कम्युनिष्टको झन्डै दुईतिहाइको सरकार ढलमल भयो । कम्युनिस्ट पार्टी त टुक्रेर छिन्नभिन्न भइसक्यो । राजनैतिक स्थिरता ल्याउने नाममा हजारौँ नेपालीले रगत बगाइसकेका छन् । त्यसैले ‘र’ बाट बनेको राजनीति मन पर्नैपर्ने हो ।
‘र’ बाटै रातो बन्छ । रङमा रातोलाई नै रङहरुको राजा भन्छन् । भन्छन नि रातो राम्रो गुलियो मिठो । हाम्रो मात्र हैन संसारकै राष्ट्रपति ‘र’ बाटै बनेको छ । प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ राष्ट्र/राज्य जो र बाटै बनेको हुन्छ । राजकाज नभइ दिन, समाज, शासन नै चल्दैन । ‘र’ बाटै बनेको राजतन्त्र स्वाहा भए पनि रमाइलो नमानी कोही खुसी, आनन्द हुनै सक्दैन । रगत र रक्तसञ्चार बिना शरीर चल्नै सक्दैन । रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भन्ने गीत नै छ । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भएन भने देश बलियो हुन्न भन्ने कुरा सानो बच्चादेखि रातो, कालो, गोरो सबैलाइ थाहा छ । रात भएन भने निद्रा पुग्नेगरी सुत्नै पाइदैँंन अनि ग्यास्ट्कि जस्ता रोग लाग्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नै घट्छ । यस्तो महामारीमा राहत नभर मान्छेहरु आहात भइरहेका छन् । भित्र बाहिर राम्रोलाई नै सबैले खास राम्रो भन्दछन् ।
राजनीति मात्र हैन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवन राम्ररी चलाउन रणनीति बनाउनैपर्छ । होली रंगहरुको पर्व हो । रेशमलाल चौधरीको रिहाइको रटाइले देशको राजनीति नै यताउता भयो । रिस नउठ्ने र नरिसाउने मान्छे कतै देख्नुभाछ ? रेकी उपचार विधि जानियो भने आफ्नो उपचार आफैँं गर्न सकिन्छ । सोवा रिप्पा नेपालको आफ्नै उपचार विधि हो । यी दुवै नेपालकै मौलिक उपचार पद्धति हुन् । फिचरलाई रुपक भनेजस्तै राम्री महिलालाई सबैले रुपा भन्दछन् । कसै कसैले र कै प्रयोग गरेर महिलामाथि नराम्रो गाली गर्छन् । रुघा लाग्दा कागतीपानी, नुनपानी खानुपर्छ । आराम गर्नुपर्दछ ।
भगवानको नाम पनि र बाटै राम, राक्षसको नाम पनि र बाटै रावण । माहुरीको नाइकेको नाम रानो पनि र बाटै । कृष्णकी प्रेमिका राधाको नाम पनि र बाटै । उपियाँले झै रातदिन सताउने रुपियाँ पनि रबाटै । रबाट बनेको राणाशासनको अन्त्य नभएको भा तपाई र मेरो कुन हालत हुँदो हो ?
मलाई यो जन्ममा कसैको रैती भएर बस्न मन छँदै छैन । प्रमाण जुटाउनका लागि कुनै पनि विषयको रेकर्ड राख्नैपर्छ । रिन लागे पनि दिन नलागोेस् भन्छन् मान्छेहरु । रेशमी धागोबाट बुनेको कपडा साह्रै राम्रो मात्र होइन बलियो समेत हुन्छ । मान्छेहरूले फेसबुकबाटै बिहे गर्न थालेकाले रतौली खेल्ने परम्परा हराउँदै गए पनि कसैलाई चिन्ता छैन । रतन्धो लागेपछि मान्छेले रातमा आँखा देख्दैन । राहु र केतु लागेपछि मान्छेलाई उठ्नै धौ–धौ पर्छ । हिजोआज दसैंमा रियाँटे पिंग हराए पनि देशको राजनीति देख्दा रिंगटा लागेर आउँछ । पटक पटक फुटेको राप्रपा रबाटै बनेको छ.. हो । तरुनी केटीले लरक्क परेको कपालमा रातो रिवन बाँधेको कति राम्रो देखिन्थ्यो पहिले–पहिले । अहिले पो कपालै खौरिएर हिड्छन् त ।
भगवानको नाम पनि र बाटै राम, राक्षसको नाम पनि र बाटै रावण । माहुरीको नाइकेको नाम रानो पनि र बाटै । कृष्णकी प्रेमिका राधाको नाम पनि र बाटै । उपियाँले झै रातदिन सताउने रुपियाँ पनि रबाटै । रबाट बनेको राणाशासनको अन्त्य नभएको भा तपाई र मेरो कुन हालत हुँदो हो ? म जान पाइन भन्दैमा रारा र रेसुंगालाई नराम्रो भन्न पाइन्छ र ? रसिलो नभएको सुन्तला कसले किन्छ र हँसिलो नभएको र कट्टु नलगाएको रेखा थापाको फिल्म कसले हेर्छ र ? राम्रो नराम्रो जे जस्तो गरे पनि रवि लामिछानेले सञ्चारमा राज गरेकै छन् । कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि ऋषि धमला यो देशका सक्रिय पत्रकारमै गनिन्नछन् ।
मैले यो गन्थनमा नव रसको कुनै मतलव राखेको छैन । हास्य रस हो रसाउन खोजेको र मैले रोजेको । पश्चिमासँगको रस्साकस्सीले रसियाजस्तो ठुलो देश रेसा झैँ टुक्रा टुक्रा भएको कसलाई थाहा छैन र ? रञ्जन कोइराला छिट्टै रिहा भए त मेरो टाउको फुटाए र पनि के लाग्छ र ? मेरो ठुलो दाजुकै नाम रिदयहरि हो । रञ्जना र रञ्जिता मेरा भाञ्जीहरु हुन् । जिन्दगी रहरै रहरको घुम्ती हो । एकपटक मैले आफैँ लेखेको थिएँ :
रुन पनि पाइन्न हजुर काठमाडौँ सहरमा
बित्ने भयो जिन्दगानी रहरै रहरमा
रेसम फिरिरि रेसम फिरिरि…..,उडेर जाम कि डाँडैमा भञ्ज्याङ…
गीतमा विदेशीसमेत छम्छमी नाचेको भुल्नु भो ? र, यसरी र का धेरै सन्तान छन् । यी सबैलाई सम्झेर र चर्चा गरेर साध्ये नै लाग्दैन । खुकुरी रम, वल्र्ड दरबार, रज, रथ, रह, रोक, राम, रासन, राशी, रित, रिडी, रिमा, रिती, रिल, रिंग, रुखो, रुद्राक्ष, रुनु, रुजू, रुचि, रुलर, रेल, रेणु, रैथाने, रोल, रिट, रौँ, रौनक, रौरव, रौतहट, रानीवन, महारानी, रअ आदि आदि । र को यस्ता जरुरी र राम्रा राम्रा सन्तान छन् । त्यसैले मलाई नेपालको राजनीतिमा रअको प्रभाव र दबाब नहोला जस्तो लाग्दैन । नेपालको राजनीतिलाई सारंगी झैँ र्याईँ्याई रेटेको यसैले हो जस्तो लाग्छ ।
हनुमान ढोकाबाट इन्द्रजात्रा सुरु, लिङ्गो यसरी